Ku-simaha R/Wasaaraha DKMG oo warbixin ka dhageystay Odayaasha Dhaqanka. – SBC
Ku-simaha R/Wasaaraha DKMG oo warbixin ka dhageystay Odayaasha Dhaqanka.
Posted by Webmaster on July 3, 2012 Comments
Ugu horeyn Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed oo ka warbixinayay sida ay howshooda u socotoiyo waliba sidii loo soo xuli lahaa Ergooyinka.
Waxeyna Madaxda dowladdu ka codsadeen inhowlihii loo idmay ay u madax banaanaadaan maadaama la yiri Masiirka UmmaddaSoomaaliyeed ayaa maanta gacantiina ku jirta.
Ku simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Ganacsiggaiyo Warsadaha Mudane Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif oo maanta booqdayhalka uu shirka uga soconayo Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed islamarkaana ugamahadceliyay Odayaasha sida ay Warbixintooda u soo gudbiyeen islamarkaana usheegay in Masiirka Ummadda Soomaaliyeed ay gacantooda ku jirto loona baahanyahay iney si xilkas ah uga soo baxaan howshii loo idmaday balse aysan jirincid howlahooda ku lamaansan.
“Runtii waxey ila tahay hadalka SalaadiintaAniga iyo Xukuumaduba qiimo weyn buu ugu fadhiyaa maxaa yeelay waa dadkii ugusareeyay Ummadda Soomaaliyeed, Waxaase leeyahay wax iidan ogeyn wax dhici karama ahan waayo waxaa tihiin dadkii loo idmay Samata bixinta Ummadda Soomaaliyeed”.
Wuxuuna intaasi ku daray in dalka uu in mudaah ku soo jiray dhibaatooyin kala duwan balse dadaalo badan oo Soomaaliya loosoo maray haddana aan lagu guuelysan laakiin maanta ay meel wanaagsan wax lagabilaabay maadaama dadkii ehelka u ahaa Xaajada laga bilaabay oo ah OdayaashaDhaqanka Soomaaliyeed oo inta uu dalka dagaalada Sokeeyay ka jireen Iyagadhexdhexaadinayay Beelaha Walaalaha ah oo ay dirirtu dhexmarto marka haddaOdoyaashaasi ayaa Masiirka dalka iyo dadka gacantooda lagaliyay madaama ayyihiin kuwa ehel u ah howlaha socdo ee lagu doonayo in Soomaaliya lagu samatabixiyo Aayaheeda.